के छ बन्दीपुरमा त्यस्तो ? जहाँ पुगे एक लाख २० हजार पर्यटक – Gorkha Sansar
के छ बन्दीपुरमा त्यस्तो ? जहाँ पुगे एक लाख २० हजार पर्यटक
गोर्खा संसार २०७६, २६ पुष शनिबार ०२:२३
बन्दिपुर, २४ पुस
सन् २०१९ मा एक लाख २० हजार पर्यटकले तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको भ्रमण गरेका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी गरी एक लाख २० हजार पर्यटकले बन्दीपुरको भ्रमण गरेको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।
बेमौसममा बन्दीपुरमा चिनियाँ पर्यटक अत्यधिक रहने गरेका छन् । बास नबसे पनि भ्रमणका लागि मात्रै आउने पर्यटकमध्ये चिनियाँ पर्यटक बढी रहने गुरुङले जानकारी दिए । हाल बन्दीपुरमा दैनिक ५०० भन्दा बढी पर्यटक भ्रमणका लागि आउने गरेका छन् ।
बन्दीपुरमा स्वदेशी तथा पर्यटकको आगमन बढ्न थालेपछि व्यवसायीले सुविधासम्पन्न होटल खोल्ने क्रम वृद्धि भएको छ । होटल व्यवसायीसमेत रहेका पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष गुरुङले हालै मात्र रु आठ करोडको लगानीमा होटल दरबार हिमालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी हाल बन्दीपुरमा ९÷१० होटल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा बन्दीपुरमा दुई लाख ५० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । बन्दीपुरमा हाल हिमालय दरबार, ग्रिनपार्क, फेवा, गाउँघर, वल्र्ड इन, बन्दीपुर प्यालेस, मगर भिलेजलगायत साना ठूला गरी ५७ होटल तथा २२ घरवास सञ्चालनमा छ । ती सबै होटलमा एकै पटक एक हजार ३०० देखि एक हजार ४०० पर्यटकले रात बिताउन सक्नेछन् ।
कोलाहल, धुँवाधुलोबाट केही टाढा घुम्न जाने सोच बनाएकालाई बन्दीपुर उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ । सदरमुकाम दमौलीदेखि १८ किलोमिटर डुम्रे हुँदै आठ किलोमिटरको उकालो यात्रा तय गरेपछि बन्दीपुर पुगिन्छ । यहाँबाट मनोरम हिमशृङ्खला, पहाड, टाकुरा अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको बन्दीपुरबाट अन्नपूर्ण, माछापुछ्रे धवलागिरिलगायतका हिमशृङ्खला देखिने भएकाले यहाँ पुग्ने जोकसैको मन लोभिने गर्दछ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन र बन्दीपुरको पर्यटनलाई विश्वमाझ चिनाउन दौड प्रतियोगिता गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले जानकारी दिए । माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अवसर पारेर माघ १ गते दौड प्रतियोगिता हुँदैछ । थापाले भने, “दौडले व्यक्तिको शारीरिक विकासको साथसाथै बन्दीपुरको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरेका छाँै ।”
खुलातर्फको दौडमा प्रथम र द्वितीय हुनेलाई क्रमशः रु ३० हजार र रु १५ हजार साथै आन्तरिकतर्फको दौडमा प्रथम र द्वितीय हुनेलाई क्रमशः रु १५ हजार र रु सात हजार नगद प्रदान गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । आन्तरिक र खुला गरी करीब २०० धावक सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष आयोजित प्रतियोगितामा ९० धावकले सहभागिता जनाएका थिए ।
“खेलकूदको माध्यमबाट पनि बन्दीपुरमा पर्यटक भित्र्याउन प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिमा दौड प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन्छौं”, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले भने । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि करीब रु चार लाख खर्च हुने अनुमान छ ।
दुबै मृगाैला पिडित सहकर्मीकाे उपचारमा सहयाेग जुटाउदै मिडिल इष्ट का कामदारहरू
२०७५, १८ मंसिर मंगलवार ०७:२३
पालुङ्टार ८ मा भाेलिदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गरिने
२०७७, २ कार्तिक आईतवार २१:४९
सातै प्रदेशका श्रष्टाहरूले घन्काए सिद्द गुफा, माेहन सुवालले पाउने भए कवि क्षेत्र प्रताप अधिकारी स्मृति पुरस्कार २०७५
२०७५, ७ आश्विन आईतवार १५:४९
२०७६, १४ मंसिर शनिबार १४:५०